Cher Kuparadza Basa Nakawandisa Plastic Kuvhiya? - Macelebs
Cher Kuparadza Basa Nakawandisa Plastic Kuvhiya?
Inodhura Shamwari dzake hadzitende kuti arikuparadza basa rake nekuvhiyiwa epurasitiki yakawandisa, kunyangwe paine gwaro rakagadzirwa netabloid. Makuhwa Cop inogona kukanganisa nyaya yekunyepedzera. Isu tinoudzwa kuti hapana chokwadi pazviri.
Richard Mudiki / REX / Shutterstock
Zvinoenderana ne Globe , shamwari dzinozivikanwa dzemuimbi dzinotya kuti ave nemanip uye matucks akawanda zvekuti ave kuita kunge asingazivikanwe uye zvichakuvadza chimiro chake chenyeredzi. Muongorori wezvekushambadzira uyo asina kumbobata Cher anobva afungidzira nezvemaitiro aangaite, uye anowedzera, 'Tichifunga nezvezera rake uye chimiro chakasimbiswa neveruzhinji, ndinofunga zvinokanganisa chitarisiko chake.'
akadzingwa paedra kubva kumadzimai epamba
'Mumwe anofungidzirwa kuti ndiye anotaurira nzvimbo iyi kuti,' Cher yakanga iine zvinhu zvakawanda chaizvo zvakaitwa - kusanganisira kuva nembabvu dzakadzikira zvikuru pakuvhiya kuti dziwane chiuno chakatetepa. Iye anopokana tipster anowedzera, 'Cher aimbove nyuchi imwe yerudzi, asi hupenyu hwake hwehupenyu hwese nekuvhiya kwepurasitiki kwakabvisa izvo zvakamuita kuti abude pachena. Vanhu, kunyanya vatungamiriri vemafirimu, vakazviona. Shanduko dzese dzakaparadza chimiro chake - uye basa rake! '
Makuhwa Cop akamhanyisa nyaya yetabloid nemutauriri waCher, uyo akairamba seisina maturo. Magazini yacho inovanza kukotama zvisina zita 'masosi' uye vanovhiya epurasitiki vasina kumbobata muimbi, asi iye rep rep arikuenda pachinyorwa kurasa chivimbo. Hapana munhu mudenderedzwa remukati raCher anotenda kuti basa rekushongedza rakakanganisa basa rake.
Izvo zvakakosha kuti uzive, Cher anga akavhurika pamusoro pemakore pamusoro pekuitwa kweye cosmetic maitiro. Muimbi akatombozvinongedzera saiye 'poster musikana wekuvhiya kwepurasitiki.' Muchokwadi, akaedza kurwisa kusvibiswa uko kuvhiyiwa kwekushongedzerwa chinhu chinofanira kunyara nacho, achitoti mubvunzurudzo, 'Zvinondifadza.' Pfungwa iyi yekuti avo vane hushamwari nemurume wemakore makumi manomwe nematatu vanonetsekana nekuvhiyiwa kwepurasitiki munzira yebasa rake hazviite zvine musoro.
Pamusoro pezvo, Cher anga achimubata panguva imwe chete Pano Tikaendazve kushanya uye kugara muLas Vegas kubva munaGunyana 2018. Anopedzisa mamwe ese maVegas gigs munaGunyana, mushure maizvozvo anoenderera mberi achitenderera nyika parwendo rwake rwepasirese. Fans havana kumira kutenga matikiti kumakonzati emuimbi nekuti vari kunetsekana nekuvhiyiwa kwepurasitiki kwaangave akawana. Izvo zvakare hazvina kumumisa iye kubva kunongedza co-nyeredzi basa mu2018 Mamma Mia sequel.
Gore rapera, Makuhwa Cop yakashatisa iyo Globe nekunyepera kutaura shamwari dzaCher dzakatenda kuti airwara zvakanyanya kuti aenderere mberi nekuita. Kufamba kwenguva kwakaratidza zvachose kuti rondedzero. Nguva pfupi yapfuura, iyo magazini yakagadzira nyaya isina musoro pamusoro paCher achiomesa muviri wake paanofa netarisiro yekumutswa kuupenyu. Ichi chinyorwa chazvino nezve muimbi anoonekera ndeye ngano.
Jennifer Lopez Kuunza maJenareta Pachishanyi Kudzivirira Konzati Kudzima magetsi?
Christina Aguilera Kugadzira Diva Anoda Kushanda PaRuzha Rwiyo rwe 'Mulan' Remake?
blake shelton akanyengera mukadzi
Angelina Jolie Achiedza Kuchera Kumusoro Kusviba PaVakadzi Brad Pitt Ari Kufambidzana Pachivande?
Kurt Russell naGoldie Hawn vakabatwa vachiita bonde nemapurisa pazuva ravo rekutanga